ပံ့ပိုးကူညီမှုများမပါဘဲ လွှမ်းမိုးနိုင်သူများနှင့် လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်း6ခု | Martech Zone
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် အရင်းအမြစ်များကြီးမားသော ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်သာ သီးသန့်ထားသည်ဟု လူအများက ယုံကြည်နေသော်လည်း ၎င်းသည် မကြာခဏ ဘတ်ဂျက်မလိုအပ်ကြောင်း သိရှိရခြင်းမှာ အံ့သြစရာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည် ၎င်းတို့၏ e-commerce အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်တွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို ရှေ့ဆောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အချို့မှာ ယင်းကို ကုန်ကျစရိတ်လုံးဝမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Influencers များသည် ကုမ္ပဏီများ၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ မီဒီယာလွှမ်းခြုံမှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနောက်လိုက်၊ ဝဘ်ဆိုက်လည်ပတ်မှုများနှင့် အရောင်းတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ယခု Youtube တွင် အကြီးဆုံးအကောင့်များ ပါ၀င်သည် (ထင်ပါသည်။ PewDiePie ကဲ့သို့ နာမည်ကြီး Youtube ဂိမ်းကစားသူများ အံ့အားသင့်စရာကောင်းသော စာရင်းသွင်းသူ 111 သန်းရှိသည့်) သို့မဟုတ် သတ်သတ်မှတ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများရှိ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အကောင့်မျိုးစုံ (ဥပမာများသည် လူနာနှင့် ဆရာဝန်လုပ်ဆောင်နေသော သြဇာအာဏာရှိသူများဖြစ်သည်)။
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာဆက်လက်ကြီးထွားလာရန်ခန့်မှန်းထားသည်။ 12.2 တွင် 4.15% မှ $2022 billion ရှိသည်။အမှတ်တံဆိပ်ငယ်များသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရာတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်မျှသာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပံ့ပိုးကူညီမှုမပါဘဲ အမှတ်တံဆိပ်များသည် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများနှင့် တွဲလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း6ခု ဖြစ်သည်-
1. Influencer ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု လက်ဆောင်ပေးခြင်း
အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ ပို့စ်များအတွက် ငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလက်ဆောင်ပေးခြင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏စာရင်းကို အသုံးချနိုင်ပြီး သြဇာလွှမ်းမိုးသူသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာလွှမ်းခြုံမှုပမာဏအချို့ကို ပေးဆောင်သည့် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများကို လဲလှယ်ပေးနိုင်သည်။ အကြံပြုချက်တစ်ခုသည် လဲလှယ်မှု၏ တိကျသောဘောင်များကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်းမရှိဘဲ လက်ဆောင်တစ်ခုကမ်းလှမ်းလိုကြောင်း အကြံပြုခြင်းဖြင့် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများထံ အမြဲချဉ်းကပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ထိပ်တန်းသြဇာလွှမ်းမိုးသူ အများအပြားသည် သင့်တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်ရန် "တွန်းအားပေး" သည်ဟု မခံစားရသောကြောင့် ဖြေကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မညီညာသော ကုန်သွယ်ရေး။ မညီညာသော ကုန်သွယ်မှု Influencer ၏ Instagram ဖိဒ်ပို့စ်သည် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်တိုင်ထက် ပိုမိုကုန်ကျသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။
သြဇာလွှမ်းမိုးသူများသည် ထိပ်တန်းသြဇာလွှမ်းမိုးသူအများအပြားရှိသကဲ့သို့ တစ်နေ့လျှင် တံဆိပ်ပေါင်း ရာပေါင်းများစွာကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရာနှင့်ချီသော တံဆိပ်ပွဲများရရှိကြောင်း အမှတ်တံဆိပ်ကို အမြဲသတိထားသင့်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုဖော်ရွေပြီး စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ခြင်းသည် အမှတ်တံဆိပ်အား လျင်မြန်သော “ကြွေးကြော်သံ” ထက် ၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားကြောင်း သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူကို အချက်ပြစေပြီး ရေရှည်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ရှာဖွေနေမည်ဖြစ်သည်။
Berina Karic၊ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူ ထိပ်တန်း Influencer စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့် ယဉ်ကျေးစွာ လိုက်နာရန်လည်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သူမရဲ့ အကြံပေးချက်ကတော့ လက်ဆောင်ကို လက်ခံရရှိပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ နှင့် တစ်စုံတစ်ခု လဲလှယ်လိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရန် influencer နှင့် check in လုပ်ပါ။ ဤဖော်ရွေသောအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုအမျိုးအစားသည် ကြီးမားသောအမှတ်များရနိုင်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်ကို ထင်ရှားစေပါသည်။
2. Influencer ခရီးများ
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည် ခရီးစဉ်တစ်ခုကို စီစဉ်နိုင်ပြီး သြဇာလွှမ်းမိုးသူအများအပြားကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်နှင့် တည်းခိုစရိတ်အတွက် လွှမ်းခြုံမှုပမာဏ ဆယ်ဆရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည် သီးခြားနေရာတစ်ခုသို့ ခရီးသွားရန် သြဇာရှိသူငါးဦးကို လက်ခံကျင်းပနိုင်ပြီး ဤအချိန်ကို ထုတ်ကုန်အတွက် အကြောင်းအရာဖန်တီးရန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအား ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် ပို့စ်များစွာကို ထုတ်ဝေရန် အခွင့်အရေးအဖြစ် ဤအချိန်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ PR နည်းဗျူဟာကို ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်များစွာဖြင့် ၎င်းတို့တွင် ထိပ်တန်းသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများရှိသည့် အခြားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ဖန်တီးရှင်များနှင့် ခရီးသွားရန် အခွင့်အရေးအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ကို ကြော်ငြာသည့် ပို့စ်များစွာကို ဖန်တီးပေးသည့် ပို့စ်များစွာကို ဖန်တီးထားသည်။ Influencer ခရီးစဉ်များသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးလွှမ်းမိုးနိုင်သူများကို အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အမှတ်တံဆိပ်၏အခွင့်အရေးကို ပေးဆောင်သည့် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများနှင့် ရင်းနှီးသောရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ရန် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဒီဗျူဟာ ဖြစ်ခဲ့တာ။ Revolve ကဲ့သို့သော လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပထမဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များမှ ရှေ့ဆောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ကြော်ငြာပို့စ်များတွင် 10-15 ခုနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ကို တဂ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း နေ့စဉ် ဇာတ်လမ်းဗီဒီယို ဒါဇင်နှင့်ချီသော ထိပ်တန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော နေရာများတွင် ၎င်းတို့သည် ထူးခြားဆန်းပြားသောတည်နေရာများကို လက်ခံကျင်းပပေးမည်ဖြစ်သည်။
3. Influencer ပွဲများ
ခရီးစဉ်များကို စီစဉ်၍မရသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်၊ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော အစီအစဉ်များသည် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများသည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် အပြန်အလှန် အကြောင်းအရာများစွာကို ပို့စ်တင်နိုင်သည့် ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အမျိုးအစားကို တင်ပြနိုင်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ရုံးခန်း၊ စားသောက်ဆိုင် သို့မဟုတ် အခြားပျော်စရာနေရာများတွင် ပွဲစီစဉ်နိုင်ပြီး ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို လူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများအတွက် လက်ဆောင်တောင်းများ ပေးနိုင်သည်။ အတွင်းအဖွဲ့သည် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံကာ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်၏သရုပ်ပြမှုကို ရိုက်ကူးခွင့်ပေးစဉ်တွင် ထုတ်ကုန်၏အကျိုးကျေးဇူးများကို တိုက်ရိုက်ရှင်းပြနိုင်သည်။ အကြံပြုချက်ကို လိုလားသူတစ်ဦးက ကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်နှင့် Instagrammable setting ကို အလှဆင်အမှတ်တံဆိပ်များအောက်တွင် ဓာတ်ပုံများရိုက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လှပစွာအလှဆင်ထားသော စားပွဲဆက်တင်များကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်သုတ်ပုဝါများ သို့မဟုတ် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုတဂ်များဖြင့် မျှဝေနိုင်သည့်နေရာ။
4. ပါတနာ အမှတ်တံဆိပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ပွဲတစ်ခုကျင်းပခြင်း သို့မဟုတ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့ ဆက်သွယ်ကာ ၎င်းတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော လှုံ့ဆော်မှုအခွင့်အလမ်းကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ ပြိုင်ဘက်မဟုတ်သော အမှတ်တံဆိပ်အများအပြားသည် ကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောကမ်ပိန်းကို စီမံခန့်ခွဲရန် အပြည့်အ၀ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲ ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အဝရရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အထူးသဖြင့် မိတ်ဖက်အမျိုးအစားများအတွက် ဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို လက်ဆောင်ခြင်းတောင်းများတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် နေရာတစ်ခု၊ ဟိုတယ်နေရာထိုင်ခင်းများ၊ ခရီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့တွင် အထူးပြုသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်၍ အခြားဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ပါတနာများစွာပါဝင်ပြီး ထူးထူးခြားခြားလွှမ်းမိုးမှုရှိသောအတွေ့အကြုံများကို ဖန်တီးရန် ယခုအချိန်အထိပင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက် ကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံမှုပမာဏကို ပေးစွမ်းသည်။
5. Influencer ကုန်ပစ္စည်း ချေးငှားခြင်း။
အထူးသဖြင့် စျေးကြီးသည် သို့မဟုတ် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်ဆောင်မပေးနိုင်သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်၊ ၎င်းတို့သည် ငှားရမ်းပူးပေါင်းမှုအမျိုးအစားကို အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမျိုးအစားတွင် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်း၊ ရိုက်ကူးမှုပြီးသွားပါက ၎င်းကို ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏လူမှုရေးချန်နယ်များတွင် အကြောင်းအရာကို မျှဝေခြင်းတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်း PR ကုမ္ပဏီများစွာသည် ရိုက်ကူးပြီးသည်နှင့် ထိုအရာများကို ရိုက်ကူးပြီးသည်နှင့် ထိပ်တန်းမီဒီယာများမှ အယ်ဒီတာအဖွဲ့များသို့ အပိုင်းအစများ ချေးငှားကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန်အတွက် ဤနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုကြသည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးသူသည် ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာအသစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်ရန် ဇာတ်ကြောင်းများ သို့မဟုတ် ထူးခြားသည့်အပိုင်းများကို ရှာဖွေနေသည့်အခါ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။
6. Influencer မီဒီယာ မိတ်ဖက်များ
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည် လက်ဆောင်မပေးနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ချေးငှား၍မရပါက၊ ၎င်းတို့သည် အပြန်အလှန်မီဒီယာမိတ်ဖက်များမှတစ်ဆင့် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူနှင့် လက်တွဲနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ အင်တာဗျူးများ သို့မဟုတ် အခြားဖော်ပြချက်အမျိုးအစားများမှတစ်ဆင့် မီဒီယာလွှမ်းခြုံမှုကို လုံခြုံစေသည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ဇာတ်လမ်းတွင် သြဇာရှိသူတစ်ဦးအပါအဝင်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ အမှတ်တံဆိပ်များသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ကြိုတင်ညှိနှိုင်းနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူသည် အမှတ်တံဆိပ်ကို tag လုပ်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် မီဒီယာဆောင်းပါးကို မျှဝေခိုင်းစေပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်အရွယ်အစားရှိရှိ၊ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုအား ကြော်ငြာရန်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်၊ အရောင်း၊ မီဒီယာလွှမ်းခြုံမှုနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာနောက်လိုက်တစ်ခု တိုးတက်စေရန် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဘဏ်ကိုမခွဲဘဲ အနိုင်ယူနိုင်သောမိတ်ဖက်များဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် ဖန်တီးမှုဗျူဟာများကို အသုံးချနိုင်သည်။ မတူညီသော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ဖလှယ်မှုများကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မည်သည့်နည်းဗျူဟာသည် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး အနိုင်ရသော မိတ်ဖက်များတဝိုက်တွင် ၎င်းတို့၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
Tags: ဘေရီနာ ကာရစ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ရပ်များသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော မီဒီယာမိတ်ဖက်များလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ထုတ်ကုန်ချေးငွေသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောထုတ်ကုန်လက်ဆောင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဝန်ဆောင်မှု လက်ဆောင်ပေးခြင်းinfluencer ခရီးစဉ်များမိတ်ဖက်အမှတ်တံဆိပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းမညီမျှသောကုန်သွယ်မှု